ukugoba okusamaphinifa okushibhile okuthengiswa kokuphakelwa kwemishini yokwenza izinhlanzi ngentengo enhle kakhulu
Ikhono:60~ 80kg / h
Isingeniso Sokwehlisa Pellet Mill
Ukubheka okuswelayo kwe-pellet mill njenge-extruder eyodwa esezingeni eliphezulu nge-drive drive kuthathe ukuthandwa okuningi futhi kwamukelwa kabanzi. I-extrusion of feeddss inhloso yokuhlanzisisa kanye nokuvuthwa ngaphansi kwezinga lokushisa eliphakeme kanye nengcindezi ephezulu. Ngokuvamile kufaka uhlobo olomile nohlobo olumanzi. Amapensela akhiqizwa lo mshini aqinile, ukumelana namanzi nokungahambi kahle.
Izici Ezintantayo Pellet Mill
1.Ifakwe nge-impeller feeder, isivinini sokuguqula imvamisa kanye nedivaysi enamandla yokudla umfaniswano nokusebenza okuthembekile.
2.Inhlanganisela enengqondo yokuthwala i-spindle ebonakalayo iqinisekisa ukusebenza okuthembekile nokuphephile.
3.Ubude be-pellets obuhlelekayo benziwa ngokushintsha okufayo okuhlukahlukene.
4.Ama-pellets aqediwe angagcina ukuntanta 3-15 amahora ngaphandle kokungcoliswa kwamanzi.
5.Uhlobo lomshini kanye nomshini wokudoba wezinhlanzi wohlobo olumanzi lwakho olukhethile.Umshini wohlobo olumanzi udinga i-boiler ukwenza umusi ongahambisa umusi endaweni yokubulala bese uvuthisa impahla eluhlaza kusengaphambili. Ukukhishwa kungaphezulu komshini wohlobo owomile esimweni samandla afanayo. Ngakho-ke umshini wohlobo olumanzi ulungele ukukhiqizwa kwesilinganiso esikhulu.
Ukuntanta Pellet Mill Ukusebenza Isimiso
I-extrusion ingachazwa njengenqubo yezobuchwepheshe okungukuthi, ukuphoqa okokudla okuluhlaza okukodwa kwisimo senqubo elandelayo (njengokuxubana, Ukushisa, ukusika, njll.) flow ngokusebenzisa die, Yenza ukwakheka kwezinto ezibonakalayo noma ukuqhuma kwegesi. Ukwenza ama-feedstocks avela ezweni elivulekile abe yinhlama ebunjiwe eqhubekayo, ukunamathisela okuphumayo kukhishwe ngemigodi yepuleti yensimbi. Ububanzi bezimbobo bubeka ububanzi bama-pellets, ezingasukela osayizi abahlukahlukene abahlukahlukene.
Indali Ejwayelekile Yemiphunga Yokwenza Ukuphakelwa Kwezinhlanzi Ezinempilo
Idatha yezobuchwepheshe ye-Floating Pellet Mill
imodeli umthamo (t / h) amandla (kw) amandla wokondla ( kw) usuku lwesikulufaimitha ( mm) ukusika amandla ( kw)
Ividiyo yokugaya i-pellet mill